Ukutshatyalaliswa kweNkqantosi encinci - I-Rihoo Industry (Hongkong) Co., Limited
Iibhola ezincinci zebhola ezinobuncinane be-grooves ebhokheni kwi-40% engumthunzi, ukungcola, ukungcola kunye nokungcola okubangelwa ukubola. Ukutshatyalaliswa kubangelwa kukusetyenziswa kakubi kunye neendawo ezimbi ezibangelwa yiyo ziza kubangela i-torque kunye neengxolo. Ukungaphumeleli kwimizimba emancinci evela kummandla wendalo nokungcola kunokuthintelwa, kodwa kunye nokubona okulula kunye nesiso esilunayo kunokukwazi ukubona isizathu salesi sihlulo. Ngethuba nje ukusetyenziswa nokufakela okufanelekileyo, ukuguguleka kwamabherethi amancinci kulula ukuphepha. Iimpawu ze-Erosion zishiywe kwinqanaba elincinci lokuthwala umzila ngefuthe lokulayisha okanye ukungenakulungiswa kokungeniswa kwexabiso. Ukutshatyalaliswa ngokuqhelekileyo kwenzeka xa umthwalo udlula umlinganiselo wokuvunwa. Ukuba ayifakwanga ngokuchanekileyo ukwenzela ukuba umthwalo kwisithintelo esithintekayo esicatshulwayo sifunde. I-micro-indentation kwiimakhonkqo zokuthwala iya kuvelisa ingxolo, ukunyakaza kunye nexesha elongezelelweyo.
I-Mini Groove Ball Ebonisa Ukutshisa Ukucubungula